शिशु आहार र दुधमा हानिकारक रसाइन मिसाउन दिने अनुमति ! | Pennepal
Home हेडर शिशु आहार र दुधमा हानिकारक रसाइन मिसाउन दिने अनुमति !
शिशु आहार र दुधमा हानिकारक रसाइन मिसाउन दिने अनुमति !
विभागअन्तर्गतको वीरगन्जस्थित खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख हस्त राईले भने भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
दक्षिण अफ्रिकालाई अष्ट्रेलियाले हरायो, सिरिजमा कब्जा